European Central Bank inozvidza cryptocurrencies | Linux Vakapindwa muropa
European Central Bank inozvidza cryptocurrencies sezvo isingazvione seine basa rakakodzera
European Central Bank inozvidza cryptocurrencies. Iye achangobva kutaura izvozvo haisi parizvino kutyisidzira kugadzikana kwemari munzvimbo yeeuro. Asi, kunyangwe pasina kuratidza kushingairira, haina kuvhara musuwo wekushandisa kwayo.
Zvese izvi akasimbisa mukati gwaro rako rekupedzisira pane iyo nyaya yakatumirwa neChishanu. Mariri, ECB yakataura izvozvo iyo yakasanganiswa kukosha kweiyo crypto midziyo idiki inoenderana neiyo yemari system. Akaenderera mberi achiti chikamu chemari chinosungira ku cryptocurrencies chinoramba chiri shoma. Kune mabhangi muEU anoita seasina mari ye crypto yakakodzera kutariswa.
1 Cryptocurrencies haisi mari
2 Pachave neEuropean Bitcoin?
3 Kunze kwenzira yekutonga
4 Sei ndichiti unorerutsa mari yemadhora?
Cryptocurrencies haisi mari
European Central Bank inofunga izvozvi cryptocurrencies haiite mashandiro emari. Huwandu hwevatengesi vanoshanda navo hwakaderera. Sangano tkana zvine chinobatika chinokanganisa hupfumi chaihwo kana pabumbiro remari.
Mumashoko acho chaiwo:
Iko kushomeka kwakanyanya kwemitengo yemari ye crypto, kusavapo kwerutsigiro kubva kumabhanga epakati, uye kutambirwa kushoma pakati pevatengesi kunodzivirira midziyo ye crypto kubva pari zvino kushandiswa seinotsiva mari nemari, uye zvinoita kuti zviome kwazvo kuti zviwanikwa zve crypto zvisangane nehunhu hwe mari yemari.
Anotaridza zvakare nezvekusagadzikana kwemazuva ano kwemhando idzi dzekuchengetedzeka. ECB inoti vanogona kudzikira zvishoma kana vakavimbiswa nenzvimbo dzinochengeterwa mabhanga epakati. Asi chinhu chacho hachisi nyore kwazvo. Kuita izvi kunogona kukonzera matambudziko matsva. Zvinoenderana nechinyorwa chimwe chete:
"Kubatana uku kunogona kukonzeresa kudiwa kwakawedzerwa kwemabhangi epakati, izvo zvinogona kuve nemitemo yezvemari nekuzadzikiswa kwayo."
Pachave neEuropean Bitcoin?
European Central Bank hairegi kuburitsa mari yaro yedhijitari. Kunyangwe, kutaura chokwadi, haaratidze kushingairira kuzviita panguva iyoyo futi. Chaizvoizvo, mari yeEuropean cryptocurrency inogona kugadzirwa sechinhu chiri nyore kushandisa uye chisina njodzi chinosangana nezvinodiwa neruzhinji zvehupfumi hwakachengeteka uye hwakadhiriviwa, ”rinodaro bhanga guru.
Saizvozvo, Mario Draghi, purezidhendi wesangano, akazviramba. Panguva iyoyo akataura kuti ECB haisi kuona chero "kongiri inoda" kuburitsa dhijitari vhezheni ye euro. Akataura zvakare fungidziro yake yekuti masangano emari eEU haaratidzike seanofarira macryptocurrencies severuzhinji.
Kunze kwenzira yekutonga
Crypto zvinhu zvakare vari kunze kwechikamu chemutemo wazvino wekubhadhara masevhisi yeEU. Uyezve, pasi pehutongi huripo, crypto assets 'haigone kupinda muzvivakwa zvemisika yemari yeEU (MFUE).
Ngatitaurei rugwaro zvakare:
Crypto midziyo haigone kushandiswa kugadzirisa zvine mutsindo MFUEs, dambudziko nderekuti haigone kutarisirwa sechengetedzo.
Central securities depositories (DCV) haigone kuenderera nekudzora yakavharirwa midziyo. Kunyangwe dai epakati mabhanga aibvisa crypto-asset-based zvigadzirwa, ivo vanofanirwa kupihwa marezenisi uye kuzadzisa zviripo zvemutemo zvinodiwa. Kunyangwe izvi zvaizoreva kuwedzera mari uye pasina mabhenefiti akajeka ehupfumi hweEuropean Union
Nekudaro, inopedzisa kuti njodzi kana zvingangoitika zveetekinoroji iyi "inogumira uye / kana inokwanisika zvichienderana nezvinodiwa pamusika zviripo ...".
mitemo uye manejimendi ekuchengetedza ”.
Sei ndichiti unorerutsa mari yemadhora?
Ichokwadi kuti vemabhangi vanofanirwa kuve vanochengetedza. Blockchain tekinoroji chinhu chitsva chinhu, uye nyaya dzekuchengetedza dzakataurwa. Asi, mumaonero angu chisarudzo chezvematongerwo enyika.
Iko kushandiswa kwekrispto mari sezvazvinoreva zvinoreva kurasikirwa kwekutonga. Chingave algorithm uye kwete vezvematongerwo enyika vanogona kusarudza saizi yemari base.
Zvisinei, pane zvakawanda zvekuita maererano nekuchengeteka. Dambudziko guru nderekuti ungawana sei chiyero chakaringana chekutonga pasina kuwira mukukanganisa kumwechete kwenzira yemari iripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » European Central Bank inozvidza cryptocurrencies.
Ndinofunga iwe unorerutsa iyo European Central Bank.
Ini handibvumane kuti sarudzo iyi ndeyematongerwo enyika. Zvese zviito zveECB neESBB zvinoitirwa chinangwa chakapfava, senge kudzikama kwemutengo (inflation inotenderera 2%), inova nzira yehunyanzvi. ECB inoshanda nekuzvimiririra kwezvematongerwo enyika uye hurumende dzeEuropean hadzina kana kuda chero hunyanzvi hwemari sezvo vachigona kuwana mhedzisiro yakafanana nemitemo yezvemari.
Ndine urombo kukuudza kuti hakuchazombove neyepamutemo cryptocurrency nekuti nehunyanzvi haina basa. Blockchain tekinoroji haigadzirise chero dambudziko remari uye kana vakamboburitsa mari yemadhijitari yaizove neyepakati registry modhi, iri nyore kuita uye inoda zviwanikwa zvishoma, ichipa chengetedzo imwechete.
Izvo hazvisi nezve kurasikirwa kwekutonga pamusoro pemari yekupihwa. Kunyangwe Bitcoin iine muganho wekumanikidza we21M, izvo hazvireve kuti iyo algorithm haigone kuchinjiswa kuti iunze mari zhinji. Muchokwadi, kune macryptocurrencies ayo anoshandisa zvine simba mari yekupa mhando uye iyo ECB haifungi nezvayo nekuti macryptocurrencies anoedza kugadzirisa dambudziko risipo uye haatombobudirire. Izvo hazvikure mushe, mashandisirwo anodhura uye anononoka, uye inoshandisa simba rakawandisa zvekuti haina nharaunda.
Ndinoda kuti iwe uongorore mumatambudziko emari aya aunotaura nezvazvo kumagumo kuti tikwanise kuakurukura.
Kana iwe uchida unogona kutarisa zvimwe [zvinyorwa] (https://lunaticgeek.com/tags/bitcoin/) iyo yandakanyora kare kare kuyedza kutonhodza iyo Bitcoin hype.
Ndatenda nekutaura kwako. Ini ndinovimbisa kuverenga zvinongedzo uye kuchera zvakadzika mumazuva mashoma anotevera